हिलारी कोट्टाम: सामाजिक सेवाहरू समस्याग्रस्त छन् । हामी त्यो सुधार्न सक्छौं - English-Video.net
म तपाइँहरूलार्इ ३ वटा कथाहरू भन्नेछु
सम्बन्धहरूको शक्तिका बारेमा
जसले शताब्दीकै सघन समस्याहरू सुल्झाउछन ।
कहिलेकाही यस्तो देखिन्छ
कि गरिवी, असमानता, अस्वस्थता, हिंसा,
सबै समस्याहरू त्यही ब्यक्तीसँग मात्र छ
मैले चिनेको त्यस्तै एकजनाको बारे बताउँछु
म उसलार्इ एल्ला भन्नेछु
एल्ला एउटा बेलायती शहरमा बस्छे
जहाँ पसल, भट्टी बन्द छन
खेलमैदान उजाड छ
र, एल्लाको घरभित्र तनाव छ
केहि सुन्नै नसकिने हल्ला छ।
टिभी पूरै चर्को आवाजमा खोलिएको छ।
उनको एक छोरा अर्को छोरीसँग लडिरहेछ।
अर्को छोरा रायन भान्छाबाट मुख छाड्दैछ
र शयनकक्षको ढोकापछि थुनेको कुकुर भुक्दैछ
एल्ला किंकर्तब्यबिमूढ भएकीछिन
उनी ४० बर्षदेखि यो समस्यामा छिन
उनले केहि मेसो पाएकी छैनिन, उपायहिन छिन
उनका सबै सहयात्रीहरू अभद्र थिए
दुखको कुरो, उनको एक छोरा संस्थाले लगेको छ
उनीसँग बस्नै तीनैजना बच्चाहरू
समस्याग्रस्त बाँचेका छन, स्कुल जाँदैनन
एल्ला भन्छिन - उनी आफ्नी आमाको
जस्तै जीवन दोहोर्याएकी छिन
मैले एल्लालार्इ भेट्दा त्यो शहरमा
७३ वटा विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध् थिए।
ती ७३ सेवाका २४ फरक विभागहरू छन, जो
एल्ला, उनका केटाहरू, बच्चाहरूसँग परिचित छन
उनीहरू तनाव ब्यवस्थापनमा ती संस्थाको
सहयोग लिने बारे सोचिरहेका छैनन
सामाजिक/युवा कार्यकर्ताहरू, स्वास्थ्य सेवी
गृह ब्ववस्थापक र प्रहरीहरू नियमितजसो
त्यो परिवारलार्इ भेट्ने गर्थे।
सरकार भन्छ, आज बेलायतमा एल्लाको जस्तै
१ लाख परिवारहरू छन, जो आर्थिक, सामाजिक
वातावरणीय वंचितीकरण मुक्तहुन संघर्षरत छन।
र, उनीहरू भन्छन समस्या व्यवस्थापनमा प्रति
वर्ष प्रति परिवार साढे दुर्इलाख पाउण्ड
खर्चदा पनि समस्या उस्तै छ ।
कुनै प्रयासले केहि फरक पारेको छैन
एल्लाको जस्तै अर्को घरको मानचित्र हो यो
यो चित्रले ३० वर्षसम्मको मध्यस्थता देखाउँछ
एल्लाकोझैं यी पनि एक योजनाका अंग होइनन।
यसमा निश्चित लक्ष्य छैन।
यी प्रयासहरू खास मुद्दा सम्बोधन गर्दैनन।
यी जबरजस्ती प्रयासहरू मात्र हुन।
मलार्इ एक प्रहरीले भने-
"हेर, म खबरमात्र छाड्छु, अनि फर्कन्छु।"
त्यसैले, संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा मैले
यस्ता परिवारसँग समय बिताएकी छु।
किनकी म हाम्रा संस्थाहरूले काम गर्न नसकेका
ठाउँहरूबाट सिक्न चाहन्छु। जान्न चाहन्छु-
एल्लाको जस्तो घरमा बाँच्न कस्तो हुन्छ?
के भैरहेछ? फरक के गर्न सकिन्छ, जान्नुछ।
पैसा झुक्याउने खेल मात्र हो किनकी सरकार नै
एल्लाको जस्तो परिवारका लागि लाखौ पाउण्ड
खर्च गरेको बताउँछ। पहिलोकुरा मैले यो जाने।
खासमा के हो भने
हाम्रो प्रणालीमा यो खर्च भएको छ।
यसरी एक सुका पनि एल्लाको परिवारमा पुग्दैन
जसले साँच्चिकै फरक पारोस्।
खासमा हाम्रो प्रणाली त्यो गायरोस्कोप हो
जुन यस्तै परिवार वरिपरी घुम्छ र तीनलार्इ
उस्तै हालतमा छाडिदिन्छ।
र, मैले कार्यक्षेत्रमै खटेकालार्इ पनि भेटे
थाहा पाएँ कि यो जटिल अवस्था हो।
१४ वर्षे रायनको सामाजिक कार्यकर्ता, टोमको
८६प्रतिशत समय प्रणालीको सेवामा बित्छ
सहकर्मीहरूसँग बैठक गर्न, फाराम भर्न
फेरि फारामबारे छलफल गर्न
आश्चर्य त यो छ कि
रायनसँग बित्ने १४% समयपनि विभिन्न जानकारी
सूचना लिदैमा बित्छ।
उनले रायनलार्इ सोध्छन्-
कत्तिको धुम्रपान गर्दछौ? रक्सी पिएका छौ ?
बिधालय कहिले गयौ ?
यस्तो सोधपुछले सामान्य बोलचाललार्इ ध्वस्त
पार्ने सम्भावना हुन्छ।
यसले टोम र रायनबीचको सम्बन्ध बनाउन
आवश्यक सहयोग गर्दैन।
जहिले यो मानचित्र बनायौं,
छक्क परेर यसलार्इ हेरिरहे
उनीहरुको कक्षमा यो घस्रिरह्यो।
धेरै समयसम्म, तर अन्त्यमा परिणामशुन्य ।
र, यो क्षण एकदमै असफलयुक्त रह्रयो,
अनि स्पष्ट बन्यो कि
हामीले फरक ढंगले काम गर्नुपर्थ्यो।
साहसका साथ एल्लाको शहरका नेताहरूले
रायनको अनुपातको ठीक उल्टो गर्न सहमत भए।
जो एल्ला वा उनकोजस्तो परिवारसँग काम गर्छ
अब त्यसले ८०% समय त्यो परिवारसँग र २०%
समय कार्यालयको काममा बिताउनेछ
अझ उन्नत कुरो यो रह्यो
कि परिवारले नै सजिलो
पर्ने हिसाबमा सहयोगी कर्मचारी छान्न पाए।
त्यसैले एल्ला र अर्की आमालार्इ
उपलब्ध विशेषज्ञ मध्ये एक जना छान्नका लागि
र, धेरै मान्छेहरूले हामीसँग काम गर्न चाहे
किनभने यो काममा प्रणाली ब्यवस्थामा नभै
तिमी परिवर्तनका लागि जान्छौ ।
अनि एल्ला र ती आमाले प्रत्येकलार्इ सोधे-
"मेरो छोराले मलार्इ कुटे तिमी के गर्छौ?"
र, पहिलो ब्यक्तिले भने -
"अँ, म सबभन्दा नजिकको ढोका खोज्नेछु
र म बिस्तारै पछि हट्नेछु,
अझै हल्लाभए मेरो हाकिमलार्इ बोलाउनेछु।"
र, आमाहरुले भने, तिमी जान सक्छौ ।
अर्को मान्छे जो प्रहरी थिए उनले भने, म
उसलार्इ भुइँमा लडाउछु अनि के गर्छु थाछैन।
र, आमाहरूले धन्यवाद भने।
उनीहरूले गल्ती स्वीकारेकाहरूलार्इ छाने
किन त्यस्तो गरेँ त्यो उनीहरूले थाहा पाएनन
भने - कि उनीहरू शब्दजाल बुन्न जान्दैनन।
उनीहरूले मानवीय गुण देखाए, आमाहरूलार्इ
जस्तो बेलामा पनि सहयोग गर्ने बताए
हुन सक्छ उनीहरू त्यति सजिला छैनन ।
यी नयाँ समू्हहरू र परिवारहरूलार्इ
केही रकम दिर्इयो
जुन उनीहरूले चाहेको कुरामा खर्च गर्न सक्छन
र, एक परिवार रात्रीभोजका लागि निस्के।
धेरै पछि पहिलो पटक उनीहरू म्याकडोनाल्ड
गएँ, बसेँ, कुरा गरे, एक अर्कालार्इ सुने ।
अर्को परिवारले समूहलार्इ सोध्यो
कि उनीहरू परिवारलार्इ सहयोग गर्न सक्छन ?
र एक आमाले पैसा लिर्इन र उनले
त्यो पैसा सामाजिक व्यवसायमा प्रयोग गरिन
र, छोटो समयमा नै,
केहि नयाँ हुन थाल्यो -
समूह र कर्मचारीहरूबीच सम्बन्ध बन्यो
र, केहि मननयोग्य परिवर्तनहरू भए।
सायद यो आश्चर्यजनक होर्इन
कि एल्लाको यात्रामा केहि ठूला कदमहरू थिए
ती पछाडी गए, र अगाडि पनि
तर आज उनले आर्इटी कोर्श पूरा गरिसकिन,
उनी रोजगार भर्इन, बच्चाहरू स्कुल जानथाले।
र छिमेकीहरू जो पहिले
उनको परिवार त्यहाँबाट सरोस भन्ने चाहन्थे
अहिले उनीहरूसँग केहि
उनीहरूले केहि नयाँ मित्रताहरू बनाएका छन।
र, यी तिनै मानिसहरू जो यो परिवर्तनमा
संलग्न छन, उही परिवार, उही सहकर्मीहरू
तर यो सम्बन्धले परिवर्तनमा सघाउ पुर्यायो ।
अतः म एल्लाका बारे भन्दैछु, मलार्इ लाग्छ
कठिन समस्याहरू सुल्झाउनलार्इ सम्बन्धहरू
नै हामीसँग उपलब्ध विशेष स्रोतहरू हुन। तर
आज सम्बन्धहरू, राजनीति, सामाजिक नीतिहरू,
र कल्याणकारी संस्थाहरूले निर्क्यौल गर्छन।
र, मलार्इ बोध भयो कि यो फेर्नु जरूरी छ।
सम्बन्धहरूका बारेमा मलार्इ के लाग्छ?
म हामीबिच सामान्य मानवीय वन्धनका बारे
भन्दैछु, यो स्वामित्व, सम्बन्धको त्यस्तो
साँचो भाव हो, जसले एल्लालार्इ जस्तै नयाँ
गर्न, परिवर्तन हुन र खुशी हुन मद्दत गर्छ।
र, तपाइँलार्इ थाहा नै छ, संस्था चलाउने
र काम गर्नेले उनीहरू एल्ला र परिवारलार्इ
मद्दत गर्न कै लागि हुन, सम्बन्धका बारेमा
कुरा गर्न त पक्कै होर्इन, किनकी
सम्बन्ध स्पष्ट रूपमै कल्याणकारी विधीसम्मत
बेलायतमा बनाइए र विश्वभर आयात गरिए ।
विलियम बेभरिड्जका सहकर्मीहरू, जो पहिलो
कल्याणकारी राज्यका पहिलो अभियन्ता थिए र
बेभरिड्ज प्रतिवेदनका लेखकलार्इ औषत
भावनात्मक मान्छे थिए भन्ने गर्थे ।
बदलामा उनीहरू यस्तो संवेदनहीन प्रणाली र
कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास गर्न पुगे।
र, आधुनिक राज्यका सामाजिक मुद्दाहरूमा
वेभरिड्जको प्रभावलार्इ नजरअन्दाज गर्न
कुनै पनि हालतमा सकिदैन।
बेभरिड्ज प्रतिवेदन छापिएको पहिलो सातामै
१ लाख प्रति बिक्री भएको थियो।
एकप्रतिका लागि मान्छेहरू रातभर लाम लागे।
त्यो देशैभरी, उपनिवेश राज्यहरू, यूरोपभरी
संयुक्तराज्य अमेरिकाभरी पढियो,
र, यसले ठूलो प्रभाब पनि पार्यो-
कल्याणकारीराज्यको योजना निर्माणमा।
संस्कृति, प्रशासनिकतन्त्र, संंस्था विश्व-
व्यापीरूपमा एउटै जस्ता देखिन्छन्।
ती हाम्रो एकदम सन्निकट छन,
जसलार्इ हामी देख्दा पनि देख्दैनौं।
यो भन्नु जरूरी छ कि २०औं शताब्दीमा ती
संस्थाहरू उल्लेखनीय रूपमा सफल थिए।
तिनले आयु बढाए, धेरै रोगहरू निराकरण गरे
र विश्वब्यापी शिक्षा एवं आवास उन्मुख गराए।
तर, ठिक त्यहि समय,
बेभरिड्जले आजको चूनौतीको बिजारोपण गरे।
मलार्इ दोश्रोकथा भन्ने अनुमति दिनुस
धुम्रपानका कारण भन्दा बढि मृत्युको कारण
के लाग्छ तपाइँलार्इ? एक्लोपन !
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, ६० वर्षका मान्छेहरू
हप्तामा ३ मा १ जनाको कसैसँग देखभेट हुँदैन।
८लाख५० हजारमा, १० मध्य १ जनाले महिनाभर
कसैसँग पनि बोल्दैनन् ।
र, यो समस्या भएका हामी मात्र होर्इनौ‌
पूरै पश्चिमी देशमा यो समस्या छ ।
चीनजस्ता देशमा यो समस्या झन संवेदनशील छ
जहाँ तिब्रतर शहरीकरणले बृद्दहरूलार्इ
गाउँमै छाडेको छ।
बेभरिड्जले बनाएको र विश्वव्यापी भएको यो
विचारले यसखालका समस्या सम्बोधन गर्दैन।
एक्लोपन संबंधात्मक सामूहिक चुनौती हो
पूरानो तरिकाले यो सम्बोधन गर्न सकिदैन।
त्यसैले यो समस्या बुझ्न, केहिवर्ष पहिले
६० बृद्दहरूको समूहसँग काम गर्न थाले
लन्डनमा, जहाँ म बस्छु।
म किनमेल गर्न गएँ, बिंगो खेलेँ
तर मुख्यरूपमा सुनेँ अवलोकन गरेँ।
म थाहा पाउन चाहन्थेँ के फरक गर्न सकिन्छ ?
तपैंले सोधे, उनीहरू २ चिज गर्न चाहन्छन्र।
उनीहरू कोही माथि गएर बत्ति फेरिदिउन वा
अस्पातालबाट बाहिरिदा साथी होस चाहन्छन।
चाहिएकोबेला व्यवहारिक सहयोग चाहन्छन।
र, उनीहरू रमाइलो गर्न चाहन्छन्।
बाहिर जान र अरूसँग रमाइलो गर्न चाहन्छन।
हामीले जस्तै साथी बनाउन चाहन्छन।
अनि हामीले फोन लियौ, र केहिमानिसहरू पनि
र, सेवा शुरू गर्यौ जसलार्इ 'सर्कल' भन्यौ‌
० ८०० नम्बरको निशुल्क फोनसेवा शुरू गर्यौ
ताकी उनीहरुले सहयोग चाहिँदा फोन गर्न सकुन
थुप्रै कारणले उनीहरूले हामीलार्इ फोन गरे
पाल्तु जनावर विरामी हुँदा फोन गरे।
मोबाइल प्रयोग गर्न नजान्दा, डिभीडी बिग्रदा
अस्पतालबाट घर आउनका लागि साथी चाहिदा
उनीहरूले हामीलार्इ फोन गरेँ।
सर्कलले सामाजिक भित्रेपात्रो पनि बनाएको छ
बुनाइ, निशाना लगाइ, संग्रहालयभ्रमण, तातो-
बेलुन, जे भन्नुस, यी रमाइला चीजहरू जसले
मित्रताको गाँठो बाँधेको छ, यी चीजहरूलार्इ
मित्रताको सम्बन्धले प्रतिस्थापित गर्यो।
बेलिन्दाका बारेमा बताउन दिनुस ।
बेलिन्दा, सर्कलको सदस्य, नितम्ब शल्यक्रिया
गर्न अस्पाताल जाँदा सर्कलमा फोन गरिन।
डेमनले सोधे - कसरी सहयोग गर्न सक्छु?
बेलिन्दा भन्छिन- हैन ठिकै छ।
जोसेलिन किनमेल, टोनी बगैंचाको काम गर्छन
मेलिसा र जोय खाना पकाउन आउँदैछन
यसरी सर्कलका ५ जना सदस्य मिलेर
बेलिन्दाको स्याहार गर्छन।
८० बर्षे बेलिन्दा, २५ वर्षको महशुस गर्छिन
तर उनले यो पनि भन्छिन कि
सर्कलमा पहिलो पटक आउँदा निकै अप्ठेरो भो,
तर पहिलो पटकदेखिको सामान्य हार्दिकताले
मित्रताको बलियो सम्बन्ध बनाउन पुग्यो।
यो सम्बन्धले महंगो सेवा प्रतिस्थापित गर्यो
सम्बन्धले नै यो सब पृथकता बनायो।
मलार्इ लाग्छ तीन तत्वहरू मिलेर नै
अचेलको सामाजिक समस्या समाधानका लागि
सम्बन्धलार्इ केन्द्रमा राख्न समर्थ हुन्छ।
पहिलो, समस्याका स्वरूपहरू
फेरिदा छन र समाधानका फरक उपाय आवश्यक छन।
दोश्रो, पैसा र जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध
र, तेस्रो प्रविधी।
मैले पहिला दुर्इ तत्वका बारे बताइसके
प्रविधीले नै दृष्ट्रिकोण मापन र हजारौ
मानिसहरुलार्इ सघाउन सक्षमता राख्दछ।
हामीले प्रयोग गरेको यो प्रविधी सजिलो छ,
यो उपलब्ध डेटाबेस र मोबाइलफोनबाट बनेको छ
सर्कलले यहि विधी अपनाएको छ जसले स्थानीय-
समूहले हजार सदस्यसम्मलार्इ सघाउन सक्छ।
यसलार्इ अर्को संस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ
जुन १९७० मा बनाइएथे
जतिखेर यस्तो खाले विधी सम्भव थिएन
गुणस्तर वा दीगो जुन प्रविधीले सम्भव हुन्छ।
त्यसैले सम्बन्ध प्रविधीसँग जोडिएको छ
जसले बेभरिड्जको विधीलार्इ फेर्न सक्छ।
बेभरिड्जविधी संस्था र सिमित स्रोतका बारे छ
गुमनाम ब्यवस्थापकिय पहुँच।
मैले मेरो कार्यक्षेत्रमा देखेकी छु
कसरी स्रोतको ८०% मानिसहरूसम्म नपुगी
खर्च भैरहेको छ।
अधिकारीहरूले बढ्दै गएको प्रशासनिक
जटिलताको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ जुन
सेवाको पहुँचबाट मानिसहरूलार्इ रोकिरहेछ
वा, लाममा उभ्याइरहेछ।
र, हामीहरूको संबंधात्मक सर्कलको प्रारूप
यो तर्कको ठिक उल्टो छ।
यो भन्छ, जति धेरै मान्छे त्यति धेरै संबन्ध
र बलियो समाधान ।
म मेरो अन्तिम कथा भन्छु
जुन बेरोजगारी सम्बन्धी छ।
धेरै ठाउँहरूमा झैं बेलायतमा
हाम्रा कल्याणकारी राज्यहरू मानिसहरूलार्इ
काम दिलाउन र शिक्षा दिनका लागि
बनाइएका थिए, ताकी
उनीहरूलार्इ स्वस्थ राख्न सकियोस् ।
तर, यहाँपनि प्रणालीहरू असफल भैरहेछन
र, यसलार्इ ठीक पार्नका लागि
यी पुराना प्रणालीहरू प्रभावकारी बनाइँदैछ
जसले प्रक्रियालार्इ छोट्याएर मानिसलार्इ
विशेष्टीकरण गर्ने प्रयास भएका छन्।
यो संबंधात्मक विधीको उल्टो छ।
अनुमान गर्नुस् कतिले काम पाएका छन् अचेल?
आज बेलायतमा धेरै जागिरको बिज्ञापन हुँदैन
साथीले तपाइँलार्इ जागिरकाे बारे भन्छ।
साथीले नै यसका लागि सिफारीश गर्छ। यो उन्नत
विविध सामाजिक संजालले काम पाउन सजिलो छ
सायद यहाँ उपस्थित केहिले सोच्दैहुनुहोला
"मैले बिज्ञापनबाटै जागिर पाएको हुँ।"
सायद कुनै साथीले त्यो एड देखाएको होला?
आवेदनका लागि प्रेरित गर्यो होला।
जसलार्इ विविध संजाल आवश्यक छ,
ती नै यसबारे बेखबर छन् ।
यो थाहा पाउँदै,
लगानी र चालू प्रणालीको असफलता थाहापाउँदै
सम्बन्धलार्इ केन्द्रमा राखेर हामीले बनायौं
अरूहरूलार्इ भेट्ने प्रेरणा दिने सेवा बनायौ
काम भित्र वा बाहिरका मान्छेहरू
एकै संरचनामा काम गर्दै नयाँ अवसर
रोज्न सक्षम हुने प्रणाली बनायौं।
र, नयाँ प्रणालीको नतिजा पुरानो प्रणालीको
नतिजासँग तुलना गर्न गार्हो छ।
तर हाम्रा १ हजार सदस्यहरूसँगै
बिद्यमान प्रणालीभन्दा राम्रो गर्यौ।
त्यो मूल्यका आधारमा होस् या
प्रविधीको प्रयोगका आधारमा ।
तर सामाजिकसंजालले जस्तो संजाल बनाउन हैन।
हामीले मानिसहरूलार्इ आमनेसामने गरायौं।
साँचो सम्बन्ध बनायौ‌ र काम भेट्न सघायौं।
१९४८ मा, जीवनको अन्त्यमा,
बेभरिड्जले तेस्रो प्रतिवेदन लेखे
उनले यसमा भने, उनले भयानक गल्ती गरे।
मानिसहरूलार्इ समुदायसँग बिच्छेद गराए।
उनले भने यस त्रुटीले मानिसहरूलार्इ
प्रशासनिकतन्त्र र संस्थाको बर्गिकरणमा
आफैलार्इ प्रतिबिम्बित गरायो।
र, मानव संबन्ध स्खलित बनाउँदै गयो।
तर दुर्भाग्य बेभरिड्जको अरू प्रतिवेदनभन्दा
तेस्रो प्रतिबेदन कमैले पढे।
तर आज मानिस र समुदायहरूलार्इ नयाँ प्रणाली
र नयाँ सेवाको केन्द्रमा ल्याउनु जरूरी छ ।
त्यो दृष्ट्रिकोण, संबंधात्मक कल्याण
हामीले यो पुरानो, जिर्ण, असुहाउँदो
मिति सकिएको प्रणाली छाड्नुपर्छ।
र, हामीले यो सामूहिक संबंधात्मक प्रणाली
जसले एल्लाको जस्तो परिवारलार्इ सहयोग गर्न
एक्लोपन हटाउने प्रणाली अंगिकार गर्नुपर्छ
यसले आधुनिक श्रमबजारमा मानिसहरूलार्इ सीपको
विशिष्टतासँगै काम दिन सक्छ।
यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी चूनौतीहरु
झैं अरू समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ।
यो सबै सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ ।
सम्बन्धहरू हामीसँग उपलब्ध जरूरी स्रोत हुन।
Translated by Nirajan Thapa
हिलारी कोट्टाम: सामाजिक सेवाहरू समस्याग्रस्त छन् । हामी त्यो सुधार्न सक्छौं | TED Talk | TED.com